Raila Odinga Raysal-wasaaraha Kenya Oo Hadlay Aragtidiisa Aqoonsiga Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Raila Odinga Raysal-wasaaraha Kenya Oo Hadlay Aragtidiisa Aqoonsiga Somaliland
Nairobi(ANN)Raysal -wasaaraha Dalka Kenya Raila Odinga ayaa markii u horraysay ka hadlay aragtidiisa aqoonsiga iyo qaddiyadda madax-bannaanida Somaliland, isagoo ku tilmaamay inay Somaliland u qalanto inay aqoonsi caalami ah ka hesho beesha caalamka.
Raysal-wasaaraha Kenya Odinga waxa uu sidaa ka sheegay. Kadib markii uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wefti uu hoggaaminayay Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sh. Khaliil C/llaahi Axmed oo gargaar binu’aadanimo gaadhsiiyey xeryaha qaxootiga Soomaalidu ay ku jiraan ee dalka Kenya.
Dr. Raila Odinga waxa uu sheegay inuu si mug leh uga warhayo ulana socdo xaalada Somaliland iyo marxaladihii ay soo martayba, isla markaana waxa uu xusay inay Somaliland kaalin muhiim ah kaga jirto mandaqada Geeska Afrika , waxaanu ku amaanay raashinkii iyo dawooyinkii gargaarka ahaa ee ay Somaliland gaadhsiiyeen Soomaalidii ku tabaaloobay abaaraha iyo macaluusha ba’an ee ka jira dalka Soomaaliya ee ku jira xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Odinga waxa uu ka waramay xidhiidh saaxiibtinimo qoto dheer oo uu tilmaamay inay ka dhaxeysay Madaxweynihii hore ee Somaliland Marxuun Maxamed Ibraahim Cigaal iyo isaga Aabbihii oo ahaa siyaasi caan ka ah dalka Kenya.
Raila Odinga waxa uu sheegay in Somaliland muddo kooban ay ku gaadhay horumar ballaadhan oo dhinacyo kala duwan leh, waxaanu ku majeertay horumarka isa soo taraya ee ay ka gaadhay dhinacyada nabadgelyada, dawlad wanaagga, dimuqraadiyada, isgaadhsiinta iyo adeegyada kale ijtimaaciga ah. Sidaa awgeed waxa uu ku dooday inay Somaliland u qalanto aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho beesha caalamka.
Dhinaca kale Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sh. Khaliil C/llaahi Axmed, ayaa Ra’iisal-wasaaraha uga mahad celiyey sida uu ugu soo dhaweeyay dalka Kenya, waxaanu gaadhsiiyey salaan uu uga siday Madaxweynaha Somaliland.
“Waxaanu mar labaad uga mahad celinaynaa Raysal-wasaaraha Kenya sida uu noogu soo dhaweeyey dalkiisa, waxaanu u soo jeedinaynaa inuu sii xoojiyo xidhiidhka iyo cilaaqaadka labada dal”, ayuu yidhi Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland.